केपी ओलीले संकटकाल लगाउँछन्ः सीपी गजुरेल
काठमाडौं। देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपालका अध्यक्ष सीपी गजुरेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संकटकालको घोषणा गर्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। नेकपाले काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा उनले संकटकाल लागे ठूलो प्रतिगमनको सामना गर्नुपर्ने बताए।
उनले चुनाव र संसद् पुनस्थापनाबाहेक अर्को विकल्प पनि रहेको र त्यसतिर ध्यान दिन आग्रह गरे। गजुरेलले एकताबद्ध भएर जाने विषयमा आन्दोलन के- का लागि भन्ने कुरा प्रस्ट पार्न आग्रह पनि गरे। ‘ओलीले चालेको कदम अदालतले उल्ट्यायो भने तपाईंहरु के गर्नुहुन्छ ? संसद पुनस्थापना भयो भने आन्दोलन गर्नुहुन्छ ? तपाईंहरुको आन्दोलन केका लागि ?’ उनले सोधे।
गजुरेलले अहिलेको व्यवस्थामा पनि त्रुटि रहेको पनि बताए। ‘आज ओलीलाई गाली गरिरहेका छौं। यसको ओली जिम्मेवार पनि हुन्। तर, यो ओलीले मात्रै गर्दा भएको हो ? ओली मात्रै दोषी होइनन्। व्यवस्थामा पनि त्रुटि छ। ओलीलाई दोषीको भार त दिनुपर्छ। तर, हामीले हाम्रा दृष्टिकोण फराकिलो पारौं,’ उनले भने।